Erling Haaland Aabihiis oo booqday xerada Tababarka Kooxda Manchester United – Gool FM
(Manchester) 19 Nof 2019. Aabaha dhalay Weeraryahanka Kooxda Red Bull Salzburg ee Erling Haaland ayaa booqday xerada tababarka Manchester United, iyadoo la soo jeedinayo in Red Devils ay u dhowdahay inay la soo wareegto da’yarkan.
19-sano jirkaan ayaa dhaliyey 26 gool 18 kulan oo uu u saftay Kooxda Salzburg xilli ciyaareedkan oo ay ku jiraan todobo gool oo uu ka dhaliyey afartii kulan ee uu ciyaaray Champions League intii lagu guda jiray bilowga xilli ciyaareedkan.
Man United ayaa loo maleynayaa inay isha ku hayso bisha Janaayo heshiiska xiddiga heerka caalami ee reer Norway, waxayna isku diyaarinaysaa inay amaah ku qaadato Salzburg inta ka dhimman xilli ciyaareedka si ay uga xadaan kooxaha kula xafiiltamaya.
Sida ay warinayso The Athletic Haaland Aabihiis Alf-Inge Haaland ayaa dhawaan lagu arkay xerada tababarka Man United ee Carrington, taasoo sii hurineysa soo jeedinta ah inay u soo dhaqaaqaan soo qaadashada laacibkan.
Alf-Inge ayaa u soo ciyaaray labo ka mid ah kooxaha sida weyn ula xafiiltama Man United intii uu ku jiray xirfaddiisa ciyaareed, isagoo matalay Leeds United intii u dhaxaysay sanadihii 1997 illaa 2000 ka hor inta uusan u ciyaarin Manchester City intii u dhaxeysay 2000 illaa 2003.
Barcelona, Real Madrid iyo Juventus ayaa dhammaantooda xiiseynaysa saxiixa xiddigan xulka qaranka Norway kaasoo macallinka Red Devils ee Ole Gunnar Solskjaer kaga soo hoos ciyaaray kooxda Molde.